Somaaliyaan Filannoo Demokiraatawaa Dha Jedhame Geggeessite – Kichuu
HomeNewsAfricaSomaaliyaan Filannoo Demokiraatawaa Dha Jedhame Geggeessite
Filannoon Somaaliyaa yeroo jalqabaaf haala demokraatawaa, kan hawaasi addunyaa taajjabu ta’uun gabaasameera.
(Voa Afaan Oromoo) -WASHINGTON, DC — Biyyoota hollaa dabalatee biyyoonni giddu galeessa bahaa jiran kan akka Immirate fi Iranfaa filannoon sun kaadhimamaa isaan fedhan akka filatamuuf dhiibbaa gochaa turan gabaasa jedhu hayyuu dinagdee fi xiinxalaa siyaasaa kan ta’an lammiin Somaaliyaa Huseen Abdulkariim Gindish ni haalan. Haala jiru ennaa ibsan awaasi addunyaa, biyyoonni hollaa keessumaa somaliya keessaa dantaa hanga tokko qabaachuu malu.
Biyyoota hollaa kan akka kenya, Ethiopia fi Jabuutii qofa utuu hin taane biyyoonni giddu galeessaa illee biyattii keessaa dantaa qabu. Kun waanuma nuti eegaa turre. Biyyi kam iyyuu dantaa ofii isaa hordofa.
Lammiiwwan Somaaliyaa garuu yaada sana fudhatama dhabsiisan jedhan. Sagalee miseensonni paarlaamaa Somaaliyaa kennaniin muummichi ministeeraa duraanii Mohammed Abdulahi Farmajoo saglee 184 argachu dhaan presidaantii ta’uun filatamaniiru. Hassan Shiek Mohaamud sagalee 97 ennaa argatan, prezidaantiin duraanii Shiek sherif sheek Ahmed immoo saglee 46 argatantii jiran.
Gabaasa sagalee dhaggeeffadhaa